Ndiyenza njani iakhawunti ye-Gfwl ngaphandle kweintanethi? - Faq
Eyona > Faq > I-akhawunti ye-Gfwl ngaphandle kweintanethi-isisombululo esisebenzayo
I-akhawunti ye-Gfwl ngaphandle kweintanethi-isisombululo esisebenzayo
Ndiyenza njani iakhawunti ye-Gfwl ngaphandle kweintanethi?
Ukuyayenzaoku, vula ifayile ye-GFWLujongano ngokucinezela iqhosha u 'Ikhaya' kwikhibhodi yakho ngelixa ukhoyoGFWLumdlalo owenziwe kwaye ukhethe 'YenzaEntshaIprofayile. ” Skrolela ezantsi kwiYenzaUmdlaloIprofayileisikrini, cofa 'YenzaIngingqiIprofayile, ”Uze ufake iinkcukacha ofuna ukuzisebenzisa.Julayi 5 Ngo-2017
ukulungisa ingxaki i-logitech k800
Ndiyifumana njani iGfwl ukuba isebenze?
Khuphela uguqulelo lwamva nje lweGFWLukusuka http://www.xbox.com/en-CA/Live/PC/DownloadClient. Yifake.
Khetha umdlalo kuluhlu lweStam lemidlalo.
Cofa ekunene, kwayehambakwiipropathi.
Cofa kwithebhu yoHlaziyo.
Phantsi kohlaziyo oluzenzekelayo khetha 'Hlaziya lo mdlalo kuphela xa ndiwuvula'
15 kweyeThupha. 2019
Abaninzi banokuba sele beyazi, Imidlalo yeWindows Live, ekwabizwa ngokuba ngabadlala umdlalo njengo'Torture for Windows Live ', yeyona DRM iphambili kwezakha zenziwa ehlabathini. Ukuba umamele ngononophelo, unokumva uDenuvo ezigculela. Ndiva nje amagama: 'Imidlalo yeWindows Live'.
Yaziswa okokuqala nge-Shadowrun ngo-2007, yalandelwa nguHalo 2 kwiintsuku ezimbalwa kamva, iMicrosoft yayila iMidlalo yeWindows Live ukuba isebenze njengebhulorho phakathi kwePC kunye neXbox ukuze ukwazi ukudlala kuwo omabini amaqonga, impumelelo yeXbox kunye nokunye! Yayingumbono onomdla kwingcinga, kodwa njengoko usenokuba uyazi, ukwenziwa kwakothusa kakhulu. Ujongano lomsebenzisi lwalulizothe ngokugqibeleleyo, yayiyinto enkulu kakhulu ukuba isebenze ngokufanelekileyo, kwaye xa yayisebenza bekukho i-bug engahleliwe amaxesha ngamaxesha ukuze nje ubhabhe nawe. IMicrosoft ekuqaleni yenze iMidlalo yeWindows Live isebenza kuphela kwiWindows Vista kuba uyazi ukuba inkulu kangakanani le nkqubo yokusebenza. * ISCRREIBLE SCREAM * Kodwa kamva abanye abaphuhlisi bayixhoma ukuze isebenze kwiWindows XP nayo.
Ngoku masingene ekubeni kutheni ifunxe iidick kunye neebhola. Nje ukuba uvule umdlalo owukhethileyo, uya kubuliswa kwangoko ngesi sikrini sokwamkelwa, silandelwe iphepha le-154 le-EULA ethi iMicrosoft ingakuthuthumbisa ngokusemthethweni ukuba ulungile kubo bonke ubomi bakho. Awundikholelwa? Emva koko funda ngokwakho i-EULA? Awufuni kuyifunda kuba ucinga ukuba inde kakhulu? Kulungile ke, thabatha nje igama lam.
Wonke umntu uqale ngeakhawunti yeSilivere eyayifana neakhawunti yeSilver Xbox Live, ngaphandle kokuba sele uyihlawulele i-Xbox Live Gold. Eyona nto ibalulekileyo yegolide kwi-Xbox yayidlala kwi-Intanethi, kwaye ucinga ukuba yintoni eyenziweyo nguMicrosoft? Bavimba abadlali abaninzi kwabo babengenayo igolide nokuba babedlala kwi-PC, apho ukuhlawulela abadlali abaninzi kwi-Intanethi kwakungaziwa ngokupheleleyo ngelo xesha. Ubuncinci iMicrosoft yayinobubele ngokwaneleyo ukuba idlale ngokukhululekileyo kwi-Intanethi ngo-2008.
Imidlalo yeWindows yeWindows ikwanolu phawu lupholileyo. Ngalo lonke ixesha uvula umdlalo wakho, bekukho ithuba le-10% lokuba ifayile yakho igcinwe e ... yonakele ngokupheleleyo.
ikhowudi yempazamo 80246013
Kufana nokudlala iRussia roulette, kodwa mandundu. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa iMicrosoft yaya kwi-mile eyongezelelweyo kwaye yabethela kwifayile nganye eyigcinileyo ukuze abantu bangasebenzisi gwenxa inkqubo yokuphumelela ukufumana amanqaku asimahla. Wowu, intshukumo enkulu, wena assholes.
Ndizamile ukukopa iifayile zam zokugcina kwi-pc entsha kwaye ziye zatsala. Enkosi ngaloo nto, Microsoft. Owu, kwaye kuthekani ukuba umhlobo wakho wayebukele into kwi-Xbox yakho, ungene kwiprofayili efanayo nawe? Imidlalo yeWindows yeWindows? Ewe, ngethamsanqa uMicrosoft ukhe wacinga ngayo kwaye wagqiba kwelokuba iya kuba licebo elilungileyo UKUKUVIMBELA KWI-AKHAWUNTI YAKHO Kude Kube UMHLOBO WAKHO EGQIBE UKUBA UNGAKHALA KWI-XBOX YAKHO UKUZE UDLALA KWIKHOMPYUTHA YAKHO awukwazi ukungena kwiWindows Live. iprofayile kwiXbox yakho nakwimidlalo ngaxeshanye, ke umsebenzi olula njengokudlala umdlalo kwiPC yakho kunye nokubukela iNetflix kwiXbox ngaxeshanye bebengekho kwaphela endleleni, uMicrosoft wagqiba kwelokuba ahambe nodumo 'Olumangalisayo' ukuba Imidlalo I-W indows Live ibisele inelinye ixesha lokuvula okhuphisana nayo ngeSteam IBHAYIBHILE IMIDLALO YOKUFUNDA AMALUNGISELELO KWIMAKHISHINI EBukhoma Ngoku ukuba kufuneka uthenge i-DLC ngomdlalo emva koko uyibuyisele, ungagcina i $ 4, 99 yakho ndlelantle andiyenzi ndicinga ukuba ndifuna ukucacisa ukuba kwenzeke ntoni kuyo.
jonga izangqa ze-imeyile
Emva kweminyaka embalwa, abaphuhlisi ekugqibeleni basimamela kwaye bagqiba kwelokuba basuse ngokupheleleyo iMidlalo yeWindows Live kwimidlalo yabo ukuze baphelise enye ye-DRM ebaluleke kakhulu kwimbali ye-DRM. (Okanye isenokwenzeka ukuba iMicrosoft ayifuni kuphazamisa ukumiliselwa kwenkxaso yeWindows 10.) Kwaye ke iMidlalo yeWindows Live yaphela ngokusesikweni ngoJulayi 2014, xa uMicrosoft ekugqibeleni wabhengeza umhlala phantsi.
Ndithetha ukuba, unexabiso elingakanani lokususa i-DRM kuyo? Inqanaba apho imidlalo eza nayo yayihlala iphelela 'kwindawo ecociweyo' kwisebe lezemidlalo eTesco. Ewe, ekugqibeleni akufuneki sijongane nento ebubudenge njengeMidlalo yeWindows Live ngoku-oh. * Oh hayi. *
Ngaba i-Gfwl isekhona?
GFWLumncedisinangoku phezuluUkusebenza, unokurejista iakhawunti engaxhunyiwe kwi-intanethi xa uceliwe ukuyila.Juni 15, 2018
Ndiyifumana njani i-GFWL ukuba isebenze kuyo Windows 10?
Khetha umdlalo kuluhlu lweStam lemidlalo. Oku kuya kuthintela umdlalo ekufumaneni uhlaziyo ngokuzenzekelayo, nangona kunjalo kusafuneka uyihlaziye xa uzama ukuyidlala. Ungakujikeleza oku ngokuseta i-Steam kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi xa usungula umdlalo. Ukufumana i-GFWL isebenze kuyo Windows 10 thatha kancinci umsebenzi owongezelelweyo.
Ndingazifumana phi iifayile zelog zabathengi zeGFWL?
Iifayile zelog zomthengi we-GFWL zinokubonelela ngengqondo malunga noko kwaphula i-GFWL. Ezi fayile zibekwe apha: Ungafikelela / ujonge ezi zinto ngoku: Fumana igama lakho lomsebenzisi. Inkqubo engapheliyo ye-Windows Notepad iya kukuvumela ukuba ubone imixholo, nangona kunjalo ngenxa yohlobo lweefayile zelog ekunokuba nzima ukuzifunda.
Inkqubo yokubuyisela iqabile
Ngaba imidlalo yeakhawunti yeWindows Live inokwenziwa ngaphandle kweintanethi?
Ndikulethela iindaba ezimnandi, kukho iqhinga onokuthi ulisebenzise ekwenzeni i-windows-live-akhawunti ye-intanethi ngaphandle kweintanethi. Ndithetha ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi. Ngezihloko ezithile zomdlalo, ngokuqinisekileyo ufuna iprofayili yeGFWL. Ngelishwa kum, imidlalo yam emithathu endiyithandayo iwela kolu luhlu lwemidlalo efuna i-GFWL ukugcina inkqubela phambili.
Ngaba ikhona indlela yokukhuphela i-GFWL DLC?
Ngoku nge-GFWL le ayinayo impumelelo ye-100%. Nangona kunjalo ungazama amanyathelo afanayo kwaye iyakusebenza okwesibini okanye okwesithathu uyenza. Iyacaphukisa, kodwa ubuncinci ufumana umdlalo wakho. Nayiphi na i-DLC oyithengileyo kwixesha elidlulileyo isenokufikeleleka kwaye uyikhuphele.